Soo dejisan Norton Security Deluxe 22.16.2.22 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudNorton Security Deluxe
Bogga rasmiga ah: Norton Security Deluxe
Norton Security Deluxe – oo ah antivirus dhamaystiran oo ka socota shirkadda Symantec kaas oo abuuray isdabajooga amniga macluumaadka iyo ilaalinta xogta. Nidaamku wuxuu adeegsanayaa ilaalin badan oo nidaamsan oo ku salaysan algorithm barashada mashiinka, falanqaynta xogta akhlaaqda, injineerka cusub ee antivirus, iyo ilaalin firfircoon oo ka hortag ah. Norton Security Deluxe waxaa ku jira sawir-baadhaha antivirus oo hubinaya faylasha ku jira kombiyuutarka iyo bandhigyada saameynta ku yeesha khayraadka nidaamka iyo heerarka sumcad kasta oo la helo. Nabadgalyada laba-dhinac leh ayaa ka hortagaya galmada waxayna ka hortagaan dadka isticmaala xaasidnimada in ay helaan macluumaad aan shakhsiyadeed aheyn. Norton Security Deluxe waxay ka ilaalisaa e-mailka fayrasyada infekshanka leh, iyo maamulaha sirta ee la dhisay ayaa ilaaliya macluumaadka shakhsiyeed. Sidoo kale, Norton Security Deluxe waxay leedahay tiro fara badan oo dheeraad ah oo lagu hagaajinayo waxqabadka kombiyuutarka, kuwaas oo ah xakamaynta diskka, maamulaha autorun iyo qalabka nadiifinta.
Ammaanka macluumaadka maaliyadeed
Ka hortagga dabagalka
Hubinta heerka kalsoonida ee faylasha
Qalabka waxqabadka nidaamka
Soo dejisan Norton Security Deluxe
Faallo ku saabsan Norton Security Deluxe
Norton Security Deluxe Xirfadaha la xiriira